Herinandro hafanafana… | NewsMada
Par Taratra sur 30/04/2018
Hanao ahoana ihany ny ho tohiny sy hiafaran’izao toe-draharaham-pirenena izao? Mbola mampanahy be ihany: ao ny manantena fa hivaha sy hilamina vetivety ny raharaha, ao ny manahy tena fa mihasarotra izany. Mandra-pitrangan’izay hitranga, tombanana hanova zavatra ity herinandro ity.
Eo aloha ny fampihaonan’ny FFKM ireo mpisehatra politika. Hitondra ho amin’ny famahana olana izao krizy politika izao? Na fifampidinihana, na fampihavanana, na firosoana amin’ny fifidianana… Hiara-dalana na hifameno amin’izany ny fampihavanam-pirenena ataon’ny CFM… tsy hita be ihany?
Amin’ity herinandro ity koa ny firotsahan’ny iraky ny Sadc hoe hanelanelana. Hanao ahoana? Mahasadaikatra ny Sadc, tsipahin’ny depiote ho an’ny fanovana; eny, na ny maro aza. Anisan’ny fototr’izao krizy izao ny nampidiran’ny vondrona iraisam-pirenena ny “Ni… Ni…” tamin’ny fifidianana, taona 2013.
Hanova zavatra ny mety ho tsy fitsabahan’ny vahiny? Na ny “ady gasy” hamahana izao krizy politika izao… Mbola misy antenaina ve ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) amin’ny tena fampanajana ny lalàmpanorenana? Tsy hita be ihany izay fisaraham-pahefana amin’izao fitondrana izao.
Hanao ahoana koa ny fivoriana ara-potoana voalohany eny anivon’ny Antenimiera roa tonta amin’ity herinandro ity? Mbola ho sahy miseho vahoaka ve, ohatra, ireo depiote be vava fa tsy nandray kolikoly, mitady porofo, tsy manaiky ho diso… ? Andrasana ny vokatry ny fanadihadian’ny Bianco.
Manginy fotsiny amin’izany rehetra izany ny fankalazana ny fetin’ny asa. Hatramin’izay, saika nahina hipoahan’ny mety hisian’ny hetsi-bahoaka hatrany ny 1 mey… hahazoana manao hetsika an-dalambe. Amin’izao, lasa aloha izany: mety ho mafy kokoa amin’io. Hanafaingana sy hanamora ny raharaha?
Hafanafana ity herinandro ity. Ho tsara sa ho ratsy? Arakaraka ny ataon’ny tena ihany io. Na manantena, na manahy tena. Na ahoana na ahoana, misy farany ny zava-drehetra. Saingy tsy inona ny fiafaran-javatra iray fa fiandohan’ny zava-baovao hafa… Handeha amin’izany ve izao sa ny eo ihany no ho eo?